Abakhangisi, ingabe ukukhangisa ngeselula kuphothifoliyo yakho?
NgeSonto, Agasti 9, 2009 ISonto, Ephreli 24, 2016 U-Adam Encane
Cha, angisho ukuthi abantu abashayela amabhodi okukhangisa edolobheni. Ngiqonde ukufinyelela kubathengi namakhasimende ngeselula. Lokhu kubizwa ngokuthi Ukukhangisa Kwamaselula kodwa ngibonile abantu abaningi beyibiza Ukukhangisa Kwamaselula muva nje. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zezindlela ze- Ukukhangisa Kwamaselula; SMS/ Ukumakethwa Komlayezo Wombhalo, amakhasi ewebhu ahlelwe ngomakhalekhukhwini kanye nezinhlelo zokusebenza zeselula yizona ezintathu ezigqame kakhulu.
Ngenkathi uhlobo ngalunye lokumaketha kwamaselula lunezinzuzo nezinkinga zalo futhi zonke zithi zinezinga eliphakeme lokuhlengwa, into eyodwa mayelana nokumaketha kwamaselula engenakuphikwa ukuthi iyasetshenziswa okwandayo. Kubonakala kusesimweni esifana nokukhangisa nge-imeyili ngasekupheleni kweminyaka yama-90s nasekuqaleni kuka-2000, esicongweni sokuba yinsika kumasu amaningi wokumaketha.
Kakade sesibona izinhlobo eziningi ezinkulu namabhizinisi amancane akhuthaza uhlobo oluthile lohlelo lokuthembeka olubandakanya imiyalezo. Amalebula amakhulu omculo athengisa umculo nge amakhasi ewebhu ahlelwe ngamaselula. Izinkampani zesoftware zikhipha izinhlelo ezenzelwe kuphela idivayisi yeselula. Imibukiso yethelevishini isebenzisa i-SMS ukwenza imali ngezindleko zemiyalezo ye-premium yokuvota okusebenzisanayo. Abezombusazwe bavusa abalandeli ngezikhathi ezithile ngezexwayiso zeselula.
Ukumaketha kwamaselula kunezinzuzo ezimbili ezinhle kakhulu kunezinye izindlela zokukhangisa nezokumaketha:
Abantu baphatha omakhalekhukhwini babo - ngakho-ke ukufika ngesikhathi nokuqinisekisa ukuthi umyalezo ufika kumamukeli kuyinto eqinisekile! (Kuza nesibopho, kunjalo.)
Ukungena kwamakhasimende kwezokumaketha kwamaselula kukunikeza ifayela le- ukuxhumana okuqondile nezinombolo zabo zikamakhalekhukhwini.
Isibonelo esisodwa esihle sokusebenzisa le ndlela nge ingcebo isu mobile. Sinikeza abathengisi bezindlu ngezingqwembe ezizofakwa endaweni yabo lapho abathengi abangase bathumele khona umyalezo inombolo ethile ukuthola imininingwane eyengeziwe mayelana nendawo kanye nohambo olubonakalayo. Ngesikhathi esifanayo umthengi ungene futhi ethola imininingwane, umthengisi wezezakhiwo naye waziswa ngesicelo kanye nenombolo yocingo lomthengi ongaba khona! Sithuthukisa amanye ama-akhawunti ngekholi yezwi erekhodiwe evela kumenzeli.
Lokhu kunikeza umthengi lonke ulwazi aludingayo - futhi kunikeza umthengisi wezezakhiwo izindlela zokuxhumana naye futhi faka umthengi. Ukubeka amakhophi kukhophi yegceke akuvumeli lelo zinga lokuzibandakanya!
Ngakho-ke umbuzo uwukuthi, wenzani ukusizakala ngokukhangisa ngamaselula neziteshi ezihambayo? Yiziphi izinhlelo zokumaketha ezingamaselula eziqaliswa inkampani yakho? Uma uyi inhlangano yokukhangisa, ingabe ukumaketha kwamaselula kuphothifoliyo yakho? Kufanele kube njalo!
Tags: ukukhangisa okuhambayoUkumakethwa Kwamaselula Nethebulethiukumaketha amaselulaamasu wokumaketha eselula
Okuthunyelwe okungu-2,000 futhi Siyaqala nje!
Aug 10, 2009 ngo-6: 07 PM
Ngiyazi ukuthi ubugxeka kakhulu uChaCha esikhathini esedlule, kepha NGIZOTHANDA ukukuqinisekisa ukuthi senza izinto ezithile ezimangalisayo nge-Mobile Advertising. Ngingathanda ukukumemela kwi-webinar esiyibamba ne-VP yethu ye-Ad Sales, uGreg Sterling, kanye ne-CEO ye-4INFO - empeleni, i-webinar igxile ekuXHUMAYELENI ikhasimende.
Aug 11, 2009 ku-1: 23 AM
Imibono emikhulu. Ngicabanga ukuthi iselula ibukeka iyesabeka kubantu abaningi, kepha empeleni akukubi kangako uma ukhuluma nje nabantu abalungile.
Izinto ezithakazelisayo ozenzayo nge-real estate angle. Kufanele uhlole okuthunyelwe kwakamuva kukaDarren Herman (http://bit.ly/10t0cO) kwasendaweni.
Qhubeka nomsebenzi omkhulu. 🙂
Aug 11, 2009 ku-4: 00 AM
Ungathathi ukuhlukunyezwa kwami ​​kweChaCha - ngiyazi ukuthi kunethoni labantu abanamakhono amahle laphaya. Ngikugxeka kakhulu ukuxhaswa komphakathi kweChaCha lapho kunabafana abanjengami abanamarekhodi afakazelwe nemibono emihle yokuxhasa… mhlawumbe isikhwele. 🙂
Ngizohlola i-webinar! Ngibonga kakhulu ngesimemo. KANYE - UChaCha wamukelekile njalo ukwenza okuthunyelwe kwezivakashi lapha kuThe Marketing Technology Blog!
Aug 11, 2009 ngo-6: 40 PM
Kuhle! Futhi ngicabanga ukuthi ngizokuyisa kubhulogi lezivakashi! Kubheke ukuthi kuza ngendlela yakho.